एकै महिना दुईथरि गते ? रास्ट्र बैंक रमिते « Jana Aastha News Online
एकै महिना दुईथरि गते ? रास्ट्र बैंक रमिते
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १७:३०
मुलुकको नोट र सिक्का छाप्ने तथा निश्कासन गर्ने संस्था हो नेपाल राष्ट्र बैंक । मुलुकभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन पनि यसैले गर्छ ।
बेलाबखत अशुद्ध छापिएका नोट र सिक्काहरू पनि बजारमा आउने गरेका छन् । विगतमा यस्तो काम थोरै देखिन्थ्यो भने अहिले धेरै हुन थालेको छ । विज्ञता र अनुभवलाईभन्दा खर्च कटौतीमा जोड दिएर आउट सोर्सको पछि लागेपछि मौद्रिक निकायको उपल्लो संस्था सँधै विवाद र चर्चामा आउन थालेको हो । आफ्नो आन्तरिक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत प्रयोगमा ल्याउने बैंकको यो वर्षको क्यालेण्डरमा पनि गम्भीर कमजोरी भेटिएको छ ।
सबैलाई विदेश भ्रमण,पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम र खानपिन तथा सुख सुविधाको मोह जागेपछि साधारण काममा कसैले पनि ध्यान नदिएको परिणाम हो बैंकले निकालेको यो वर्षको क्यालेण्डर । भदौ महिनाको पातोमा अगष्ट महिनाको १९ तारिख नै नराखी छापिनु कतिसम्म गैरजिम्मेवारी होला ?
अनि जिम्मेवारीचाँहि कसले लिने होला ? एकजना पूर्व गभर्नर भन्छन् ‘बोकाले दाईं गर्न खोजेपछि एकाध वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकको हैसियत, क्षमता र प्रतिष्ठा धमिलो हुँदै गएको छ । यो वर्षको क्यालेण्डर त्यसैको गतिलो उदाहरण हो ।’